इनडेक्स र कारोबार दुबैमा तीनदेखी लगातार बढोत्तरी, नेप्स बुलिस ट्र्ण्डको बाटोमा ! | Samajik Khabar
Home मुख्य इनडेक्स र कारोबार दुबैमा तीनदेखी लगातार बढोत्तरी, नेप्स बुलिस ट्र्ण्डको बाटोमा !
इनडेक्स र कारोबार दुबैमा तीनदेखी लगातार बढोत्तरी, नेप्स बुलिस ट्र्ण्डको बाटोमा !
काठमाण्डौ, १९ मंसिर : साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्से परिसूचकमा बढोत्तरी आएको छ । ७.४५ अंकको बढोत्तरी पश्चात परिसूचक ११३१.९२ विन्दुमा अडिएको छ । त्यस्तै ए लेभर कम्पनीका कारोबार संकेत देखाउने सेन्सेटिभ इन्डेक्स ०.९१ अंकको बढोत्तरी पश्चात २४८.७७ विन्दुमा पुगेको छ ।
बिहिबार कारोबार समयमा १६८ कम्पनीको ३५ करोड ८८ लाख ३९ हजार ८६० रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको छ । अगिल्लो दिनभन्दा कारोबार रकम बढेको छ । आज कारोबार रकमको आधारमा सबैभन्दा बढि नेपाल लाईफ इन्सोरेन्स कम्पनीको कारोबार ३ करोड ५१ लाख बराबरको सेयर खरिदबिक्री भएको होे । त्यस्तै एनएमबि बैंकको २ करोड २२ लाखको कारोबार भएको छ । स्वाभलम्वन लघुबित्त बिकास बैंक, नेपाल बैंक, हिमालयन ड्रिटिलरी र सामुदायिक लघुबित्त बिकास बैंकको १ करोड भन्दा माथिकोे सेयर खरिदविक्री भएको छ ।
यस दिन सबैभन्दा धेरै सुमिट लघुबित्त बिकास बैंकका सेयरधनिले आफ्नो सम्पति ७.७८% ले बढाएका छन् । त्यस्तै गणपति माइक्रोफाइनान्स र सामुदायिकलघुबित्त बित्तिय संस्थानका सेयरधनिले ६% भन्दा बढि कमाएका छन् । त्यस्तै सबैभन्दा धेरै गुमाउनेमा दिव्यश्वरी हाइड्रोपावर परेको छ । यसका सेयरधनिले ७.०१% गुमाएका छन् । कारोबार बन्द हुदाँ दिव्यश्वरी हाइड्रोपावरको शेयरमूल्य रु ५३ मा झरेको छ ।
आज कारोबार भएका १६९ कम्पनिमध्ये ९७ वटा कम्पनिको सेयरमुल्यमा बढोत्तरी भएको छ भने ३३ वटा कम्पनिको सेयरमुल्यमा गिरावट आएको छ । त्यस्तै २६ वटा कम्पनीको सेयरमुल्यमा अगिल्लो दिनको मूल्यमा केही परिवर्तन भएको छैन ।
कारोबार समयमा उत्पादन बाहेक अन्य परिसूचकमा हरियो बत्ति बलेको छ । आज सबैभन्दा धेरै लाइफ इन्सोरेन्स २.९३% को भारी बढोत्तरी भएको छ ।
लगातार मंगलबार देखी कारोबार रकम र इनडेक्समा देखीएकोे सकारात्मक परिवर्तनका कारण बजार बुलिस ट्रेण्डमा जानसक्ने बिश्लेषकहरु बताउदछन् । नयाँ उचाईको लक्ष्य सहित अघि बढेको इन्डेक्समा प्रथम त्रैमाशको बित्तिय बिबरण र बम्पर लाभांसको आधारमा दरभाउ गर्ने प्रवृतिका कारण इन्डेक्समा फराकिलो बाटो आएको देखिन्छ । हाइड्रोपावर र इन्सोरेन्सको लाभांसको पर्खाइमा लगानीकर्ता रहेको आँकलन गर्न सकिन्छ । अल्पकालिन लगानीकर्ता हावी हुदा आवश्यक अध्ययन पश्चात मात्र राम्रा कम्पनिको सेयर खरिद गर्नु बुद्धिमता रहनेछ ।
Previous articleएकै वर्षमा गराए ९७२ जनाले गर्भपतन
Next articleकाठमाडौँबाट पोखरासम्म कार र्याली, भ्रमण वर्ष २०२०